UbuKristu bukwazi njani ukuvelisa ubundlobongela obuninzi nangona abalandeli bawo bevame ukunyusa njengenkolo yoxolo? Ngelishwa, ukulungelelanisa ubundlobongela kunye nemfazwe kusetyenziswa imigaqo yobuKristu ibe yinto eqhelekileyo ukususela kwixesha leMfazwe.
Iimfundiso ZamaKristu Zogonyamelo
Iintlabathi zeMpi-mkhosi azikho kuphela umzekelo wobundlobongela kwimbali yobuKristu, kodwa ngaphezu kweyiphi na enye ixesha, zazibonakaliswa ngobundlobongela obuninzi, obuchanekileyo obuchanekileyo ngokucacileyo ngokubhekiselele kwiingxabano zobuKristu.
KwiiNkqubela: Imbali; Uhlobo lwesiBini, uJonathan Riley-Smith ubhala:
Kwiminyaka emibini yokugqibela yamawaka amabini amawaka amanyathelo angamaKristu anobundlobongela aphumle kwiindawo ezimbini.
Eyokuqala kukuba ulwalamlo-oluchazwe ngokunyanisekileyo njengomsebenzi wamandla ombonakalo osongelayo, ngamabomu okanye njengempembelelo ecaleni, ukubulala okanye ukulimala emzimbeni womntu-kwakungekho nto embi. Kwakungathathi hlangothi kwaze kwaba yilapho ifunyenwe yinjongo yomenzi wobubi. Ukuba injongo yakhe yayingenanto, njengokwenqwenqqqqqqha, olwahlula isigxina-nangomnqweno wesigulane sakhe-inqanaba elithile elingaphathisa ubomi bogulane kwimbali - ngoko ulwaphulo-mthetho lunokuthi luthathwa ngokulungileyo.
Isizathu sesibini kukuba iimfuno zikaKristu zoluntu zidibene nenkqubo yezopolitiko okanye iimeko zezopolitiko kweli hlabathi. Kuba iinjongo zonqulo zazibandakanya kwipolitiki yelizwe, iRiphablikhi yamaKrestu, ilizwe elilodwa, eliqhelekileyo, elingu-transcendental elawulwa nguye, igosa lakhe emhlabeni libapapa, ababhishophu, ababusi kunye nookumkani. Ukuzibophezela ngokwabo ekukhuseleni kwabo kwakukholelwa ukuba kuyimfuneko yokuziphatha kwabo bafanelekile ukulwa.
Iimfundiso Zokwenyaniso Nezenkolo Zengokwenkolo
Ngelishwa, kuqhelekile ukuxolela ubudlova bezenkolo ngokugxininisa ukuba "ngokwenene" malunga nezopolitiki, umhlaba, izibonelelo, njl. Kuyi nyaniso ukuba ezinye iimeko zikhona, kodwa ukubonakala nje kwezibonelelo okanye ezopolitiko njengento engathethi ukuba inkolo ayisabandakanyeka-nokuba inkolo ayisetyenziswanga njengesizathu sobundlobongela.
Ngokuqinisekileyo akuthethi ukuba inkolo isetyenziswa kakubi okanye iphathwa kakubi.
Uya kuba nzima ukufumana naluphi na unqulo oluye lwaziswa ngenkonzo yokulungelelanisa imfazwe nobundlobongela. Kwaye inxalenye enkulu, ndikholelwa ukuba abantu bakholelwa ngokwenene ukuba imfazwe nobundlobongela beyimiphumo enengqiqo yeenkolo zabo.
Inkolo kunye nobunzima
Kuyinyaniso ukuba ubuKrestu buzenzela iingxelo ezininzi egameni loxolo nothando. Isibhalo samaKristu-iTestamente eNtsha-ininzi ngakumbi malunga noxolo nothando kunokuba imfazwe nobundlobongela kwaye nto encinci ibonakala kuYesu ikhuthaza ubundlobongela. Ngoko kukho isizathu sokucinga ukuba ubuKristu bufanele kube nokuthula-mhlawumbi kungabi nokuthula ngokupheleleyo, kodwa ngokuqinisekileyo kungekhona nje ngegazi kunye nodlova njengembali yobuKristu.
Nangona kunjalo, ukuba ubuKristu bunikela amanqaku amaninzi egameni loxolo, uthando, kunye nokungabikho gonyamelo aluthethi ukuba kufuneka kubekho uxolo kwaye ukuba naluphi na ubundlobongela obwenzelwe egameni lakhe kukungqubuzana okanye ngandlela-thile nxamnye nomKristu. Iinkolo zinikeza iingxelo eziphikisanayo kuzo zonke iimeko, ezivumela abantu ukuba bafumane ukulungelelaniswa malunga naluphina isikhundla nasiphi na isithethe senkolo esineenkcukacha ezinzima kunye nobudala.
Ukuhlobisa Iklasi Yakho? Isilumkiso: Musa ukukhupha abafundi!
Ngoko Yenzani Ngokwenene Ngabachumi?
Amahlaya kaBernie Sanders
Ukuvunyelwa kokuqala kweMarian Apparition eUnited States
IiMidlalo ze-UFC zangoku
Yintoni "iTrans Rock" Umculo?
Fumanisa kabanzi malunga neCoppelia Ballet
I-Cancer in Love - Ukudibanisa i-Zodiac